Beesha Caalamka oo farriin culus u soo dirtay xukuumadda Somaliland iyo jilayaasha siyaasdda ee dalka | Salaan Media
Beesha Caalamka oo farriin culus u soo dirtay xukuumadda Somaliland iyo jilayaasha siyaasdda ee dalka
November 28, 2019 | Published by: admin
Hargeysa(Salaanmedia.com)-Dalalka beesha caalamka ee taageera nidaamka dimuqraadiyadeed ee Somaliland ayaa farriiin culus u soo diray xukuumadda Somaliland iyo dhinacyada siyaasadeedee dalka. Deeq bixiyayaashan ayaa isugu jira 12 dal oo reer Yurub iyo Maraykanka ah, Qaramada Midoobay, ururka IGAD iyo Midowga Yurub
Dalalka iyo hay’adaha beesha caalamka ee Somaliland kala shaqeeya dimuqraadiyadayta ayaa warmurtiyeed ay wada jir u soo saareen shalay waxa ay ku sheegeen; in ay walaac xooggan ka qabaan muddo kordhinta labada sano iyo saddexda sano ah ee golaha guurtidu u sameeyey wakiillada iyo Guurtida, xadhiga aan loo aabo-yeelayn ee ay xukuumaddu ku kacayso iyo dabarka sii kordhaysa ee lagu hayo xoriyadda hadalka. “Waxaan ka walaacsanahay in dhacdooyinkan ay si aad ah u wiiqayaan heshiisyadaas taasi oo dhaawacaysa sumcadda dimuqraadiyadda Somaliland. Sidoo kale, waxaan si aad ah uga walaacsanahhay dhacdooyinka uu xadhigu ka mid yahay oo u muuqda kuwa aan sharciyad laheyn iyo xayiraadaha sii kordhaya ee xoriyadda hadalka” ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka.
Waxa aanay ku baaqeen in doorashada lagu qabto waqtigeedii ahaa 2020 ka, in la helo siyaasad loo dhan yahay, in la ixtiraamo xeerarka iyo shuruucda, iyo in la helo guddi doorasho oo kalsooni ka haysta dhinacyada siyaasadda iyo muwaadiniinta.
Muddo kordhinta goleyaasha wakiillada iyo Guurtida ayaa ay beesha caalamku sheegtay in ay si badheedh ah u dhaawacayso heshiiskii ay xisbiyada siyaasadda Somaliland bishii Julay 2019 ka gaadheen; oo la iskula gartay muhiimadda weyn ee ay leedahay in la qabto doorashooyinka golaha wakiillada iyo goleyaasha deegaanka. Kuwaas oo lagu heshiyey in ay qabsoomaan waqtiga ugu horreeyey ee suurtagalka ah siyaasad ahaan iyo farsamo ahaan.
Dhacdooyinkaas kala duwan ayaa ay beesha caalamku sheegtay in ay dhaawaceen sumcaddii dimuqraadiyadda Somaliland iyo meeqaamkeedii caalamiga ahaa.
“Labada aqal oo loo aasaasay in ay metelaan haweenka iyo ragga Soomaaliland ayaa kuraasta fadhiya waqti aad uga badan hal beeg kasta oo dimuqraadiyadeed oo lagu qiyaasi lahaa. Sida oo kale goleyaasha deegaanka ayaa iyaga oo aanay cidi igman shaqaynayey tan iyo bishii afaraad ee sannadkan 2019 ka”
ayaa lagu yidhi warmurtiyeedka dalalka iyo hay’adaha saaxibbada Somaliland ee gobalka iyo dunida.
Waxa aanu intaas ku daray, in arrimahaas dhacay awgeed ay xukuumadda Somaliland iyo dhammaan jilayaasha Somaliland ugu baaqayaan in ay mar labaad hadal iyo ficilba ku xaqiijiyaan dhaqankii soo jireenka ahaa ee ay dhexdooda khilaafka ku dhammaysan jireen, isu soo dhoweynta aragtiyaha la kala qabo iyo isu soo tanaasulka. Si loo helo jid lagaga baxo mushkiladda hadda taagan, loona qabto doorashooyinkii baarlamaanka iyo goleyaasha deegaanka oo aanu dib dhac dheeraad ahi ku iman, inta ka horreysa dhammaadka waqtigii hore loogu xaddiday ee ahaa sannadka 2020 ka.
Beesha caalamku oo warmurtiyeedkeedan ku ammaantay dadaallada dhexdhexaadinta ah ee socda. Waxa ay caddaysay in taageerada ay siiso geeddi socodka doorashooyinka Somaliland ay waajib tahay in ay xoojiso siyaasad loo dhan yahay iyo in ixtiraam buuxa la siiyo xeerarka iyo shuruucda.
Sidaas awgeed Geeddisocodka dimuqraadiyadda Somaliland ee ay beesha caalamku taageeraysaa in uu seeskeeda muhiimka ahi yahay, waajibnimada in la helo guddi doorasho oo kalsooni ballaadhan ka haysta dhammaan jilayaasha siyaasadda, iyo sida oo kale muwaadiniinta Somaliland.
Beesha caalamku waxa ay sheegtay in keliya hay’ado xooggan oo si dimuqraaddi ah loo soo doortay ay keeni karaan guulaha horumar ee ay dadka somaliland mudan yihiin.
Taas oo sida oo kalana ah, midhaha ay dalalka Somaliland la shaqeeyaa ka rajaynayaan iskaashiga ay la sameeyaan Somaliland.
Warmurtiyeedkan waxaa wadajir u soo saaray, Qaramada Midoobey, urur gobaleedka IGAD, Midowga Yurub, Maraykanka, Jarmalka, Ingiriiska, Norway, Ireland, Beljam, Sweden, Denrmark, Holland, Faransiiska, Talyaaniga, Giriigga iyo Switzerland.
Faraqa u dhaxeeya war-murtiyeedkii hore ee beesha caalamka iyo kan maanta
Faraq ayaa u dhaxeeya qoraaladii ay beesha caalamku u soo diri jirtay Somaliland iyo farriintan ay shalay soo direen.
Tusaale ahaan war-murtiyeedkii u dambeeyay oo ay soo saareen bishii January ee sannadkii 2017 oo ay ku cambaareeyeen dib u dhig lagu sameeyay doorashadii Somaliland ee madaxtooyada oo qorshaysnayd 28 March 2017 balse duruufo abaareed oo dalka ka jiray dib loogu dhigay ayaa waxa baaqaas ku saxeexnaa 10 wadan oo isugu jiray dalalka reer Yurub iyo Maraykanka iyo ururka Midowga Yurub.
Laakiin qoraalka ay dalalka beesha caalamku shalay soo saareen waxa saxeexay 12 dal oo reer Yurub iyo Maraykanka ah iyo ururada Midowga Yurub Qaramada Midoobay iyo IGAD.
Waxaana farriintan shalay ku cusub wadamo reer Yurub ah oo aan ku jirin farriimihii hore ay beesha caalamku ugu soo diri jiray iyo ururo uu ka mid yahay urur goboleedka IGAD.
Dad badan oo falanqeeya xidhiidhka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda ayaa aaminsan in qoraalkani ka culus yahay war-murtiyeedyadii ay hore beesha caalamku uga soo saari jirtay doorashooyinka Somaliland, waxaana tusaale loo soo qaadan karaa tirada dalalka bayaanka saxeexay iyo ururada caalamiga ah iyo kuwa gobalka.